Mahiga oo kulamo Muqdisho kula qaadanaya Shariif iyo Farmaajo | raascasayrmedia.com
← Madaxweyne Shariif oo shahaado guddoonsiiyay Muwaadin Soomaaliyeed oo howl muhiim ah qabtay
Madaafiic dhimasho iyo dhaawac geysatay oo ku dhacday S. Bakaaraha →
March 30, 2011 · 6:45 pm
Mahiga oo kulamo Muqdisho kula qaadanaya Shariif iyo Farmaajo
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Ambassador Mahiga ayaa maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho, iyadoo muhiimada safarkiisu ay tahay in uu kulamo la qaato madaxda sar sare ee dowladda KMG Soomaaliya si uu ugala hadlo arimo dhowr ah oo quseeya ismari waaga siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda KMG Soomaaliya.
Ambassador Mahiga ayaa kulan ay albaabadu waxa uu xarunta madaxtooyada ee Magaalada Muqdisho uu kula qaadanayaa madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Ra’iisul wasaaraha xukuumada KMG Max’ed Cabdullaahi Max’ed iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda KMG.
Kulanka ayaa lagu waramayaa in si gaar ah diirada loogu saarayo waqti kordhinta golaha wasiirada xukuumada KMG Soomaaliya, tan iyo barlamanka iyo sidoo kale ismari waaga siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha iyo barlamanka KMG kaasi oo marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareerayay.
kulankaani oo ah mid wali ka soconaya aqalka Madaxweynaha dowladda KMG uu ka deganyahay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa saxaafada loo balan qaaday in faah faahin laga siin doono marka uu soo gaba gaboobo kulankaasi.
Safarka Mahiga ee ku yimid magalada Muqdisho ayaa waxa uu ku saleysan yahay sidii madaxda dowlada KMG ugala hadli lahaa shir ay qaramada midoobe qaban qaabineyso oo la doonayo in bisha April ka dhaco magalada Nairobi ee wadanka Kenya.
Shirka ayaa la doonayo in la iskugu keeno mamulada ka jiro Soomaaliya si looga hadlo xaalada siyaasada Soomaaliya iyo sida uu noqonayo isbadal ka ku dhacayo dowlada federalka marka la gaaro August-da soo socda.
Qaramada Midoobe ayaa waxa la sheegay iney casuuntey maamuladda Puntland, Galmudug sidoo kale waxa la casuumey Ahlu Suna, balse ma cado in qeybaha lagu casuumey shirka ay ka mid tahay Somaliland oo mahiga dhawaan booqasho ku tagay.
Madaxda dowlada federalka ayaa la i xaqiijiyey iney ka biyo diideyn imaashayaha shirka ay qaban qaabinayso Qaramada Midoobe taas oo la shegayo iney tahay sababta ku kaliftey in wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Mdioobe Mahiga uu tago Muqdsho si uu uga dhaadhiciyo iney shirka yimadaan.
Dhinaca kale Ergayga qaarka ah ee Jimciyada quramaha ka dhaxeysa ayaa inta uusan soo gaarin Magaalada Muqdisho, wareysi uu siiyay Wakaalada wararka ee AP waxa uu ku sheegay in doorashada madaxtinimada ay dhaceyso ka hor bisha Augusta oo ku eg waqtiga dowladda federaaliga ee Soomaaliya.
Horaantii Bishii February ee sanadkaan ayaa inta ugu badan Barlamanka KMG Soomaaliya waxa ay cod caqlabiyad leh ay ku ansixiyeen mudo kordhin sedax sano ah oo ay ku darsadeen waqtigoodii taasi oo wadamo farabadan oo ka tirsan beesha Caalamka ay si weyn u dhaliileen, inkastoo gudoomiyaha Barlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlay mudo kordhintaasi uu sheegay in beesha Caalamka ay ku qanacday waqtiga ay korarsadeen Barlamanka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah xildhibaanada Barlamanak KMG Soomaaliya ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen mudo kordhinta Barlamanka, iyagoo madaxwenaha dowladda KMG Sheekh Shariif ugu baaqay in uu aqbalo in ay dhaco doorashada madaxtinimada, waxaana xildhibaanadaasi ka mid ahaa Saleebaan Max’ed Ibraahim oo u waramay Shabakadda Warbaahinta Shabelle.
Sidoo kale golaha wasiirada dowladda KMG Soomaaliya ayaa iyagana mudo kordhin hal sano ku dhawaaqay Axadii la soo dhaafay oo taariiqdu ay ku beegneyd 20-ka bisha March iyadoo wadamo farabadan oo beesha Caalamka ay arigtiyo kala duwan ka bixiyeen is qab qabsiga iyo mudo kordhinta ay sameysteen barlamanka iyo golaha wasiirada dowladda KMG Soomaaliya